Norway oo soo bandhigtay Tirada Qaxootiga iska dhiibay Dalkeeda iyo inta Somalida ah
[ 19 hours ago ] Khubarada oo ka digaya cudur kale oo faafa oo ka yimaada Shiinaha	Wararka Caalamka
[ 22 hours ago ] Shaqaalaha ka shaqeeya guryaha Daryeelka caafimaad oo diidaay in lagu tallaalo tallaalka Corona	Wararka Maanta Somaliska
[ 2 days ago ] Sweden oo soo bandhigtay tirada Dadka laga Ceshtay Shatiga gaari wadista	Wararka Maanta Somaliska
HomeWararka Maanta SomaliskaNorway oo soo bandhigtay Tirada Qaxootiga iska dhiibay Dalkeeda iyo inta Somalida ah
1 week ago Wararka Maanta Somaliska, Wararka Norway 0
1,387 magangalyo doon ah ayaa Norwey yimid sanadkii 2020, marka loo eego tirooyinka hordhaca ah ee ay soo saartay UDI . Tani waa hoos u dhac ku dhowaad 40 boqolkiiba marka loo eego 2019, markaasi oo la diiwaangaliyay 2,305.
Suuriya ayaa ugu sareysa liiska Qaxootiga
Somaliya la qaabilay sanadka 2020 ayaa gaareysa 23 qof oo kaliya. dadka magangalyo doonka ah badankood waxay ka yimaadeen Syria (536), Eritrea (163) iyo Turkey (83). Waxay sidoo kale ahaayeen seddexdan dal kuwa ugu badan ee yimid sanadkii 2019, laakiin hoos u dhaca tirada magangalyo doonka ee ka yimid Turkiga waxay ka dhigan tahay in wadanku uu bedelay boosaska liiska ee Eritrea.
Saddexdaan dal ayaa ugu sarreeya liiska wadar ahaan 81 dal oo ay magangalyo-doonku ka yimaadeen 2020. In ka yar toban magangalyo-doon ayaa ka yimid seddex meelood oo ka mid ah dalalkan (60 dal).
Tirada dadka magangalyo doonka ah ee aan lala socon ayaa aheyd 135 qof sanadka 2019 ilaa 88 sanadka 2020 .
76 boqolkiiba codsiyada magangalyada ee ay UDI ka shaqeysay sanadii 2020 ayaa la siiyay . Markaas dacwadaha Dublin iyo wixii lamid ah kuma jiraan. Intaas waxaa sii dheer, kiisaska uu codsaduhu ka noqdo ama ay ka joojiso UDI, tusaale ahaan maadaama codsaduhu ka tagay dalka, waa laga reebay. Boqolkiiba oggolaanshaha waa 62 marka kiisaska oo dhan lagu daro.
– Way cadahay in soo galootiga sanadkii hore ay saameyn xoogan ku yeesheen xayiraadaha safarka ee aduunka oo dhan, sababo la xiriira cudurka faafa ee 19-ka oo socda. Yurub oo dhan ayaa hoos u dhac weyni ku yimid sanadkii hore. Laakiin tani si dhakhso leh ayey isu beddeli kartaa marka xaaladda aafada ah ay dhammaato, ayay tidhi agaasimaha UDI, Frode Forfang.